Hevitra 6 maimaimpoana mamaly WordPress ho an'ny Gazety nomerika | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | lohahevitra, Wordpress
Raha te-hametaka a magazine na gazety nomerika, tsy isalasalana fa tokony hamorona azy amin'ny alàlan'ny mpitantana atiny ianao. Ny mpitantana ny atiny dia tsara indrindra, WordPress: Na dia nipoitra toy ny sehatra iray hafa hamoronana bilaogy aza izy, dia niely ny fampiasana azy (ary, vokatr'izany, nanjary nandika endrika bebe kokoa) tamin'ny sehatry ny pejin-tranonkala. Noho izany, mpitantana atiny iray ity izay tsy tokony holalanao rehefa mamorona ny pejinao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao fanadihadiana kely izahay, miaraka amin'ny rohy fampidinana, 6 modely tranonkala mamaly o lohahevitra mamaly maimaim-poana amin'izay ianao afaka manomboka nefa tsy mila mampiasa vola be. Manantena aho fa tianao ny fanangonana ary ireo lohahevitra ireo, indrindra natao ho an'ny magazine na gazety, dia mahasoa anao.
Hevitra 6 mamaly maimaim-poana
mozika: Lohahevitra mahaliana 4-tsanganana mahaliana izay hamaha ny filànay voalohany rehefa mamorona gazety. Manana motera fikarohana ao anatiny izahay, ny fahafaha mampiditra pejy ao amin'ny menio lehibe ankoatr'ireo sokajy lahatsoratra, sidebar ankavanana miaraka amin'ny lahatsoratra vakiana indrindra, ireo bitsika farany ao amin'ny kaonty Twitter anay, sns. Mikasika ny faritra afovoany, slider mahaliana iray hanehoana ny vaovao farany sy tsanganana telo eo an-tongony izay anelanelan'ny lahatsoratra. Ho fanampin'izay, dia hasehony ao amin'ny lohateny hoe toetr'andro tombanana ho an'ny faritra jeografika misy ny mpamaky sy ny mari-pana.
WP Herald Lite: Enti-milaza noho ny firafiny, a endrika mahazatra kokoa noho ny modely teo aloha. Ny tombony lehibe ho azy dia ny fisian'ny menus roa (iray ambony, misy rohy amin'ny fiasan'ny pejy toy ny ekipa fanontana, famandrihana, dokam-barotra, hevitra, sns.) Ary ny iray lehibe miaraka amin'ireo sokajy misy azy. Ho fanampin'izany, horonan-taratasy marindrano misy ny vaovao farany dia aseho eto ambany amin'ity menio ity. Izy io koa dia mampiditra motera fikarohana anatiny sy rohy mankany amin'ireo tambajotra sosialy. Mampiavaka azy ny fahononan-tena amin'ny loko.
Emptilium: Lohahevitra misy tsanganana telo, miaraka amin'ny fampiasana loko tsy dia milamina kokoa noho ilay teo aloha. Mahafinaritra, manana izy menio tokana tokana. Ao amin'ny sisiny ankavanana dia ho hitantsika ireo kisary ara-tsosialy, motera fikarohana ao anatiny, fanehoan-kevitra farany eo amin'ny pejy sy ireo lahatsoratra farany indrindra. Ao amin'ny faritra lehibe amin'ny bilaogy, ireo lahatsoratra. Azontsika atao ny manova ny typografikan'ny pejy iray manontolo sy ny loko, ankoatry ny zavatra hafa.
tsy miandany: Tsy dia kanto noho ny Emptilium, mizara ny atiny amin'ny tsanganana telo izy ary mamela menus roa, ny ambony (amin'ny fampisehoana pejy) ary ny lehibe. Mampiseho mpikorisa iray miaraka amin'ireo vaovao farany alohan'ny hahitanay ny atiny. Ireo lahatsoratra dia nalamina teo amin'ny efijery nampahatsiahy ny tumblr hatsarana.
Hueman: tsy ara-potoana bebe kokoa noho ny teo aloha dia misy menus roa (ambony sy lehibe). Miaraka amin'ny tsanganana telo dia mikarakara ny typografia izy ary mahazo aina ny fitetezana ilay pejy. Ahitana sary masina sosialy na eo ambony na any ambany ary ny motera fikarohana anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Lohahevitra 6 mamaly maimaimpoana ho an'ny gazety nomerika anao
Brad dia hoy izy:
Misaotra ny fizarana. Tiako ianao hijery ity vaovao ity, ilay lohahevitra WordPress magazine mifandraika antsoina hoe Ybrant
Manana ireto endri-javatra manaraka ireto toa ny,
~ Pejy fandraisana an-tanana feno Widgetized
~ 15+ widget manokana
~ Fanohanana amin'ny endrika fampisehoana galeriana sy sary ary maro hafa ...
Valiny tamin'i Brad